Lampard & Solskjaer oo hoggaaminaya Tababareyaasha u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha June ugu fiicnaa Premier League – Gool FM
(England) 03 Luulyo 2020. Labada tababare ee Lampard & Solskjaer ayaa hoggaaminaya liiska macallimiinta u sharraxan abaal-marinta tababaraha bisha June ugu fiicnaa horyaalka Premier League.
Steve Bruce, Nuno Espirito Santo, Frank Lampard iyo Ole Gunnar Solskjaer ayaa ah afarta tababare ee u sharraxan abaal-marinta tababaraha bisha June ee ugu fiicnaa horyaalka England Premier League.
2 Guul 1 Barbaro, iyadoo wax guuldarro ah aysan soo gaarin:-
Bruce wuxuu hiigsanayaa inuu abaal-marintiisii ugu horreeyay oo sidaas ah sameeyo kaddib markii Magpies aan laga adkaan, isagoo guul 1-0 ah ka gaaray Southampton iyo guushii 3-0 ahayd ee ay ka gaareen Sheffield United.
4 Guul 1 Barbaro, iyadoo wax guuldarro ah aysan soo gaarin:-
Tababaraha Wolverhampton Wanderers ayaa si cajiib ah 3-2 uga badiyay kooxda Tottenham Hotspur bishii Maarso ka hor saddex guul oo isku xigta oo aan gool laga dhalin bishii June, taasoo ka dhigtay in kooxdiisu u dhaqaaqdo u soo bixitaanka isreeb-reebka Yurub xilli ciyaareedkii labaad oo isku xigta.
3 Guul, wax barbaro ah ma gelin, wax guuldarro ahna ma soo gaarin:-
Tababaraha kooxda Chelsea ayaa u tartamaya abaal-marinta macallinka bisha markiisii labaad xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee maamulka Premier League.
Lampard ayaa ku faaney rikoor boqolkiiba boqol ah intii lagu jiray bilaha Maarso iyo June, oo ay ku jirto guushii 2-1 ee ay ka gaareen kooxda haysata horyaalkii 2018/19 ee Manchester City.
Solskjaer (Man Utd)
3 Guul, 2 barbaro, iyadoo wax guuldarro ah aysan soo gaarin:-
Macallinka reer Norway waxa uu sare u qaaday rajada Manchester United ee afarta sare, isagoo ku hoggaamiyay kooxdiisa guushii ay ka gaareen Manchester derby bishii Maarso kaddibna 3-0 ayuu guul kaga qaadtay labada Sheff Utd iyo Brighton & Hove Albion, kaddib markii dib loo bilaabay ciyaarista horyaalka.